Derailed n'ehihie Satọde mara mma pụtara ihe mgbu na ọnwụ maka ndị njem Amtrak na Montana
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Rail njem » Derailed n'ehihie Satọde mara mma pụtara ihe mgbu na ọnwụ maka ndị njem Amtrak na Montana
Na-agbasa News Travel • News • ndị mmadụ • Rail njem • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Taa opekata mpe mmadụ 3 nwụrụ, ihe karịrị mmadụ 50 merụrụ ahụ n'ụgbọ okporo ígwè Amtrak na Montana mgbe ụgbọ ala anọ gafere.
Ọtụtụ mmadụ nwụrụ, 50+ merụrụ ahụ taa n'ụgbọ #Amtrak na #Montana
Ụgbọ oloko ahụ gbara isi mgbe o si Chicago na -aga Seattle
Ọ dịkarịa ala ụgbọ ala anọ tụrụ
Ụgbọ oloko Amtrak na-arụ ọrụ n'etiti Seattle na Chicago mebiri n'ehihie Satọde na etiti etiti Montana, dị ka akụkọ mgbasa ozi mpaghara na mgbasa ozi mgbasa ozi kwuru.
Ụgbọ oloko ahụ na -aga ọdịda anyanwụ ruo Seattle, derailed n'etiti Havre na Shelby na -akwụsị na Montana.
Ụgbọ oloko ahụ gbapụrụ n'ihe dịka 1 mile site na Joplin, Montana, obodo nke ihe dị ka mmadụ 200.
Otu onye ji anya ya kwupụta opekata mpe ụgbọ ala anọ tụrụ aka na egwu ahụ. Ndị na -aza ajụjụ mbụ nọ ebe ahụ.
N'oge a, a na -akọ ọnwụ 3 na ọtụtụ mmerụ ahụ.
Edere ihe mberede ụgbọ oloko Amtrak ikpeazụ ikpeazụ na February 4, 2018, na Casey, South Caroline, mgbe ụgbọ oloko dara na ọdụ ụgbọ mmiri CSX kwụsịrị.
Ndị ọkachamara nchekwa na -atụkwa aro ịhọrọ oche chere ihu n'azụ mgbe ị na -agba ụgbọ oloko. Nke a bụ n'ihi na onye nọ ebe ahụ anaghị enwe ike ịtụpụ ya n'ihu mgbe ọ na -emekọ ihe. Ụgbọ oloko yikarịrị ka ha ga-akụ ihe n'akụkụ karịa isi ma ọ bụ n'azụ.